पर्दामा बरुण र आलियाको जोडी हिट, चौथो फिल्मको सुटिङको लागि कारगिल जाँदै ! « News24 : Premium News Channel
पर्दामा बरुण र आलियाको जोडी हिट, चौथो फिल्मको सुटिङको लागि कारगिल जाँदै !
एजेन्सी, १९ असोज । बलिउड अभिनेता बरुण धवन र अभिनेत्री आलिया भट्ट पहिलो पटक करण जोहरको फिल्म ‘स्टुडेण्ट अफ द इयर’ मा देखिएका थिए । सो फिल्ममा बरुण र आलियाको जाडीलाई दर्शकहरुले खुब रुचाएका थिए । सो फिल्मपछि बरुण र आलियाले ‘हम्प्टी शर्माको दुल्हनिया’ र ‘बद्रीनाथकी दुल्हनिया’मा सँगै काम गरे । ती दुवै फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई ग¥यो ।
अब यो जोडी पर्दामा पुनः पर्दामा सँगै देखिने भएका छन् । यो जोडी फिल्म ‘कलंक’मा सँगै देखिने भएका हुन् । यसै फिल्मको बाँकी सुटिङको लागि आलिया र बरुण चाँडैनै कारगिल जाँदैछन् । केही महिनाअघि देखि यो जोडीले फिल्म ‘कलंक’को मुम्बईमा सुटिङ गरेका थिए । अबको बाँकी सुटिङ भने कारगिलमा गरिने बताइएको छ ।
मुम्बई मिररका अनुसार गत विहीबार राति सलमान खानको फिल्म ‘भारत’को सुटिङ सकाएर अबु धाबीबाट फर्किएका बरुणले आगामी ‘कलंक’को लागि सेड्युअर तयार गरेका छन् ।
यो फिल्ममा बरुण र आलियाको साथमा माधुरी दिक्षीत, आदित्य राय कपूर र सञ्जय दत्त पनि मुख्य भुमिकामा छन् । यो फिल्मको केही सुटिङ सकिएता पनि पूरै सुटिङ भने आगामी नोभेम्बरमा सकिने बताइएको छ । यो फिल्मलाई करण जोहरको धर्मा प्रोडक्शनले निर्माण गरिरेहको छ ।
यो फिल्ममा माधुरी दिक्षीतकी केहि तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । फिल्ममा उनले एक वेश्याको भुमिकामा देखिनेछन् ।